Izindaba - Isingeniso Sokuthwala
Deep inkatho ibhola eziveza: eyayaziwa ngokuthi irowu elilodwa le-radial ball bearing, iyindawo esetshenziswayo esetshenziswa kakhulu. Izici zayo ukumelana okungqubuzana okuphansi nesivinini esikhulu. Lapho ukuthwala kuthwala kuphela umthwalo osabalalayo, i-engeli yokuxhumana inguziro. Lapho i-groove ball bearing ethwele inesikhala esikhulu se-radial, inokusebenza kwe-angular contact bearing futhi kungathwala umthwalo omkhulu we-axial.
Ukuqondanisa ibhola okuzenzakalelayo: ngembobo eyisilinda nomgodi oyindilinga izinhlobo ezimbili zesakhiwo, impahla yezinyoni inepuleti lensimbi, i-resin yokwenziwa njalonjalo. Isici sayo ukuthi umjaho wangaphandle wendandatho uyindilinga futhi unekhono lokuziqondanisa. Inganxephezela amaphutha adalwe ubungako obuhlukile kanye nokuphambuka kwe-shaft, kepha ukuthambekela okuhlobene kwamasongo angaphakathi nangaphandle akufanele kweqe ama-degree amathathu. Ngokuyinhloko ithwala umthwalo osabalalayo futhi ingathwala umthwalo omncane we-axial ngasikhathi sinye. Ukufuduka kwe-axial kwe-shaft (igobolondo) kunqunyelwe ngaphakathi komkhawulo wemvume, futhi kunomsebenzi wokuziqondanisa. Ingasebenza ngokujwayelekile ngaphansi kwesimo sokuthambekela okuncane kwezingxenye zangaphakathi nezangaphandle. Kufanelekile ezingxenyeni lapho ubumbano lomgodi wesihlalo othwalayo ungeke uqinisekiswe ngokuqinile.
Isakhiwo se-roller cylindrical: into egingqikayo yi-centripetal rolling bearing ethwala i-cylindrical roller. Isakhiwo sangaphakathi se-roller cylindrical bearing sisebenzisa ukuhlelwa okufanayo kwama-roller, futhi isikhala se-spacer noma se-spacer sifakwe phakathi kwama-roller, angavimbela ukuthambekela kwe-roller noma ukungqubuzana phakathi kwama-roller, futhi kuvikele ngempumelelo ukwanda kwe-torque ejikelezayo . I-Cylindrical roller ne-raceway yizindawo zokuxhumana eziqondile. Umthamo omkhulu wokulayisha, ikakhulukazi uthwala umthwalo osabalalayo. Ukungqubuzana phakathi kwento egingqikayo nobambo lwendandatho kuncane, okulungele ukujikeleza kwejubane eliphezulu. Ngokuya ngokuthi iringi ine-flange, ingahlukaniswa ibe ngamarowu we-roller cylindrical roller afana ne-Nu, NJ, NUP, N, NF, kanye ne-double row cylindrical roller bearings njenge-NNU ne-NN. Ukuthwala kuyisakhiwo esihlukanisayo sendandatho yangaphakathi nendandatho engaphandle.
Needle roller eziveza: i-roller ehambisana ne-roller cylindrical, ngokuhlobene nobubanzi bayo, i-roller mncane futhi yinde. Lolu hlobo lwe-roller lubizwa nge-roller roller. Yize inesigaba esinqamulelayo, ukuthwala kusenomthamo omkhulu wokuthwala umthwalo. Ukuthwala ngenaliti kufakwe ama-roller amancane futhi amade (ububanzi be-roller D ≤ 5mm, L / D ≥ 2.5, l ubude be-roller). Ngakho-ke, isakhiwo se-radial sihlangene. Lapho ubukhulu be-diameter sangaphakathi nomthamo womthwalo ziyefana nezinye izinhlobo zamabhere, ububanzi bangaphandle buncane kunabo bonke, obufanele ikakhulukazi isakhiwo esisekelayo esinosayizi wokufaka osabalaliswe ngokulinganiselwe. Ukuthwala ngaphandle kwendandatho yangaphakathi noma i-needle roller ne-cage assembly kungakhethwa ngokuya ngezikhathi ezahlukahlukene zokufaka isicelo. Ngalesi sikhathi, umagazini ebusweni negobolondo lomgodi ohambelana nokuthwala usetshenziswa ngqo njengendawo yokudonsa yangaphakathi nangaphandle yokuthwala. Ukuze kuqinisekiswe umthwalo wokulayisha ofanayo nokusebenza kokusebenza njengokuthwala ngendandatho, ubulukhuni, ukunemba kwemishini kanye nekhwalithi yendawo yobuso bomgwaqo we-shaft noma imbobo yegobolondo yangaphandle kufanele ifane naleyo yendandatho ethwele. Lolu hlobo lokuthwala lungathwala kuphela umthwalo osabalalayo.
Tapered roller eziveza: kungokwalolu hlobo oluhlukile lokuthwala. Amasongo angaphakathi nangaphandle we-bearing anemigwaqo yomjaho. Lolu hlobo lokuthwala lungahlukaniswa lube umugqa owodwa, umugqa ophindwe kabili kanye nomugqa amane we-tapered roller bearing. Umugqa owodwa we-roller tapered bearing ungathwala umthwalo osabalalayo kanye nomthwalo we-axial ohlangene ohlangothini olulodwa. Lapho ukuthwala kuthwala umthwalo osabalalayo, kuzokhiqiza ingxenye ye-axial, ngakho-ke kudinga okunye ukuthwala okungathwala amandla e-axial ahlukile ukulinganisela. Uma kuqhathaniswa ne-angular contact ball bearing, umthamo wokuthwala mkhulu, isivinini somkhawulo siphansi, singathwala umthwalo we-axial ohlangothini olulodwa, futhi singakhawulela ukufuduka kwe-axial kushaft noma igobolondo ohlangothini olulodwa.
Eyindilinga roller eziveza: i-bearing inemigqa emibili yama-roller, umgwaqo ovamile oyindilinga eringini elingaphandle nemigwaqo emibili yomjaho wangaphakathi engela nge-eksisi ethwele. Iphoyinti lesikhungo esiyindilinga lomgwaqo wangaphandle wendandatho lisendaweni ekhethekile. Ngakho-ke, ukuthwala kungukuziqondanisa okuziqondanisayo futhi akuzweli ephutheni lokuqondanisa phakathi kweshaft nensika ethwele, engahle idalwe yizinto ezinjengokuphambuka kushaft. Ukuzungeza okuyindilinga kuklanywe kahle, okungathwala hhayi kuphela umthwalo osabalalayo kuphela, kepha futhi nomthwalo osindayo we-axial osebenza ezinhlangothini ezimbili.
Yelula ibhola eziveza:yakhelwe ukuthwala umthwalo wejubane ngejubane elikhulu, futhi yakhiwe ngendandatho ye-washer nge-raceway groove yebhola eligingqikayo. Ngoba izindandatho zimise okomcamelo, amabombo webhola elihlukanisiwe ahlukaniswe izinhlobo ezimbili: uhlobo oluyisicaba lwangaphansi lomcamelo nohlobo lokuzivumelanisa oluyindilinga. Ngaphezu kwalokho, ukuthwala kungathwala umthwalo we-axial kepha hhayi umthwalo osabalalayo. Kusebenza kuphela ezingxenyeni ezinesivinini esiphansi nomthwalo we-axial.
Yelula roller yokuzibeka ngokwakho: okuzalayo kucishe kufane nokuzimela kokuzivumelanisa kwe-roller. Ubuso bomgwaqo wendandatho ethwele indawo eyindilinga egxile ephuzwini elihambisana ne-shaft emaphakathi yokuthwala. I-roller yalolu hlobo lokuthwala iyindilinga. Ngakho-ke, inomsebenzi wokufaka we-othomathikhi futhi awuzweli ku-coaxiality naku-shaft deflection. Lolu hlobo lokuthwala lusetshenziselwa kakhulu imishini yokumba uwoyela, imishini yensimbi nensimbi, i-generator ye-hydraulic, i-motor eqondile, i-shael propeller shaft, i-tower crane, i-extrusion press, njll.
Yelula tapered roller eziveza: umfutho ophathwayo we-roller tapered ungakha ukucushwa okuhambelana kakhulu kwe-axial. Lolu hlobo lokuthwala lungathwala umthwalo osindayo we-axial, alunandaba nomthelela womthwalo, futhi lunokuqina okuhle. Ngoba into egingqikayo ku-thrust tapered roller bearing is roller tapered, in the structure, the rolling generatrix and raceway generatrix of the washer converge at the bearing